eNasha.com - वातावरणको चिन्ता
नेपालका सेवइलाल चौधरी वृक्षारोपण र तिनको संरक्षणका लागि चर्चित भएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुरस्कृत समेत भइसकेका छन् । वातावरण, पर्यावरण, पृथ्वी आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तो उपयोग गर्ने तर तिनलाई भविष्यका सन्ततिलाई सकुशल फिर्ता दिनु पर्छ भन्ने नसोच्नेहरुका लागि सेवइलालको चिन्ता जति जायज छ, अमेरिकाकी जुलिया 'बटरफ्लाई' हिलको जुक्ति पनि सबैलाई उत्तिकै अचम्ममा पार्ने किसिमको छ । यो खबर उति नयाँ त होइन, तर पर्यावरणबारे तपाइँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने जुलिया तपाइँकी प्रेरणा बन्न चाहिँ सक्छिन् ।
जुलिया तब चर्चामा आइन्, जब उनी एउटा ६ सय वर्ष पुरानो रुखलाई बचाउन रुखमाथि अनसन शुरु गरिन् । उनले ६ सय फुट अग्लो, लुना नाम गरेको रक्त काष्ठ (रेड वुड) ढाल्ने योजनामा रहेको प्यासिफिक लम्बर कम्पनीलाई ७ सय ३८ दिन (दुइ वर्ष) सम्म रुखमाथि अनसन गरेर झुक्न बाध्य बनाइन् । उनी त्यो रुखको ६x८ को सानो बाकसजस्तो ठाउँलाई कोठा बनाई उनले अनसन शुरु गरेकी थिइन् ।
तपाइँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, यत्तिका दुइ वर्ष उनले रुखमाथिको त्यो सानो कोठामा कसरी बिताइन् होला ? उनले त्यो अवधिमा डायरी र कविताहरु लेखिन् । टाइमदेखि न्यूजविकसम्मका पत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोहरुलाई अन्तरवार्ता दिइन् । बाँकीका समय यो हाँगादेखि त्यो हाँगा ओहोरदोहोर गर्थिन् । उनी त्यहाँभित्रै खाना पकाउँथिन्, वर्षे झरी, कठ्याङ्ग्रिने जाडो र पसिना पसिना गराउने गर्मी उनले केही भनिनन् । उनलाई सहयोग गर्नेहरु कहिलेकाहीँ विभिन्न फलफूलका साथ आउने गर्दथे । उनी कतिसम्म व्यस्त थिइन् भने त्यो बेला, दुइ घण्टादेखि आठ घण्टासम्म टेलिफोनबाट अन्तरवार्ता दिने गर्दथिन् । दुइ वर्षसम्म यो इज्जतको लडाइँ बन्न पुगेको थियो र बाहिरियाहरुलाई चासो के थियो भने यो लडाइँ अब कसले जित्ने हो !
उनको माग थियो, यति पुरानो रुखलाई काट्नु हुन्न । यसलाई पछिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्छ ।
त्यसो त उनका आलोचकहरुले अभियान थाल्दा उनलाई बौलाहीसमेत भन्न भ्याए । हुन पनि यो अभियान शुरु गर्नुअघि उनको कार दुर्घटना भएको थियो । चिकित्सकहरुले उनको दिमाग खल्बलिएको र एक किसिमको पागलपनमा जिन्दगीभर रहने बताएका थिए । यो दुर्घटनापछि (त्यसबेला जम्मा २२ वर्षकी थिइन्) उनको दिमागमा अनेक कुरा खेल्न थाल्यो र उनलाई के लाग्न थाल्यो भने- रुखहरुको पनि एउटा जीवनचक्र हुन्छ । त्यो जीवित त हुन्छ नै यसले जुनी पनि फेर्छ । त्यसैले यस्ता जीवित प्राणीहरुको हत्या हुनुहुँदैन ।
कतिलाई उनको कुरा मूर्खतापूर्ण लागे पनि त्यसबेला प्यासिफिक लम्बर कम्पनीले उसको निजी वनमा रहेको ६०० वर्ष पुरानो रुखलाई ढाल्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै रुखमाथि बासस्थान बनाएर कम्पनीविरुद्ध गरेको अनसनले निजी वनमा रहेको अत्यन्तै ऐतिहासिक त्यो रुखप्रति संसारको ध्यान खिँचियो । र, कम्पनीलाई बाध्य बनाइन् कि त्यो रुख काटिने छैन बरु रुख वरपर अझ गहन वृक्षारोपणसमेत गरिनेछ ।
रुखमाथिको अनसनले जुलिया संसारभर प्रख्यात मात्र भइनन्, उनका कथालाई विभिन्न टेलिभिजन, सिनेमा र उपन्यासहरुले समेत ठाउँ दिए । उनले आफैँले पनि रुख चढ्दाताकाको अनुभवलाई 'द लिगेसी अफ लुना' पुस्तकमा उतारेकी छिन् । त्यसपछि उनले अर्को एउटा पुस्तक 'वन मेक्स द डिफरेन्स'मा पनि सहलेखन गर्न भ्याइन् ।
तपाइँलाई यो पनि बताइदिउँ कि पर्यटनका क्षेत्रमा सन् १८६३ देखि काम गरेको प्यासिफिक लम्बर कम्पनीमा ३५० कर्मचारी कार्यरत थिए । निकै नाम कमाएको यो कम्पनीको शाख पछि यति बिग्रियो कि सन् २००७ को जनवरीमा टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्‍यो । यो कम्पनीले जुलियाको माग पूरा गरेपछि जुलियाको अभियानमा साथ दिनेहरुले पछि 'वातावरण'सम्बन्धी अनेक आन्दोलन शुरु गरे, जुन अझै कायम छ ।
जुलिया र सेवइलाल चौधरीजस्तै तपाइँले तपाइँको आफ्नो घर, टोल, समाजबाट पनि यस्तै केही अभियान शुरु गर्ने हो कि !
माया यस्तो पनि ! उपाय सुन्दरी सेलेब्रिटी बलिउड गुगल मूर्ख्याइँ भव्यता विज्ञापन मुद्दा मामिला नग्नता इन्टरनेट परिस्थिति फट्याइँ श्रीमानश्रीमती उदेकलाग्दो कीर्तिमान हलिउड प्रविधि